Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka la tirtiray ka Samsung Phones
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Messages ka Samsung Cell Phone
Sida user Samsung ah waxa gabi ahaanba waa muhiim in farriimo aad sii dhawrsan. Tani waa sababta ay u badan tahay in aad isticmaasho telefoon wax walba. In dunida maanta, telefoonka Samsung ay u badan tahay waxa ku jira oo dhan oo ah macluumaad aad muhiim u ah oo ay ku jiraan farriimo.
Qaar badan oo naga mid ah isgaadhsiin via qoraalka maalmahan sidaas awgeed waa yaabka yar fariimaha qoraalka ah waa sidaa muhiim ah. Waxay inta badan waa muhimka ah ee isgaarsiinta iyo wuxuu noqon karaa mid jawaab u macluumaad badan oo muhiim ah. Sidaas waxa ugu dambeeya ee aad u baahan tahay waa in la badiyo oo dhan fariimaha aad ka qabto telefoonka. Dabcan waxaad si fudud uga badbaadi kartaa xaalad aad lumiso fariimaha qoraalka ah oo aad si fudud isagoo gurmad ah ee fariimaha aad.
Mararka qaarkood, waxaad ku waayi kartaa fariimaha aad marka aanad lahayn gurmad ah oo ka mid ah meel kasta. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in la helo hab lagu soo kabsado Farriinta tirtiray ama laga badiyay si fudud. Waxaa jira software kaa caawin kara in aad taas samayn.
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha tirtiray ka Samsung
Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado fariimaha lumay, sida ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan waa in la isticmaalo software kabashada xogta 1aad ee adduunka ee qalabka Android. Wondershare Dr. Fone u Android soo kaban doonin fariimaha oo kaliya laakiin sidoo kale files audio, video files iyo sidoo kale waraaqaha. Haddii aad caado ka mid ah laga badiyay qaar ka mid ah xog muhiim ah aad, software tani waxay noqon doontaa saaxiibkaa cusub ugu fiican. Haddii aad ka fekerayaa in ay tahay mid aad u dhib badan si ay u isticmaalaan, fakar mar kale. Software wuxuu yeelan doonaa saameyn aad la fariimaha qoraalka ah la waayay ama uu kaa lumay ee kaliya seddex talaabooyin fudud. Waxa kale oo ay la shaqaysaa in ka badan 2000 qalabka Android oo lagu daydo of OS Android kala duwan si aad u ogaato waxa aad telefoonka Samsung shaqeyn doonaan.
Wondershare Dr.Fone for Android - Recovery Samsung Text Message
Haddaba sidee baad u isticmaalaan inay ka soo kabsadaan fariimaha lumay ku saabsan qalabka Samsung? Halkan sida.
Kaliya 3 tallaabo inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ah tirtiray ka telefoonada gacanta Samsung
Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka on your computer, ka dibna waxaad arki doonaa in ay suuqa kala muhiimsan ee hoos ku qoran.
Tallaabada 1. Isku telefoonka Samsung in PC iyo awood debugging USB
Marka xira Samsung taleefanka gacanta si aad u computer, waxaad heli doontaa suuqa kala hoose. Wakhtigan, aad u baahan tahay si ay awood debugging USB telefoonka marka hore. Raac hab hoose loo sameeyo:
Fiiro Gaar ah: Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad barkinta telefoonka Samsung marka debugging USB ah. Just xerto ka dib markii aad u dhammeeyey. Markaasay aad u guurto karaa tallaabada xigta.
Tallaabada 2. Falanqeeyaan oo baarista Samsung telefoonka gacanta
Markii barnaamijka ogaadaa aad telefoonka ka dib markii aad dhigay debugging USB ah, aad arki doonaa suuqa kala ah sida soo socota. Hubi in batteriga ah ee aad taleefan ka badan tahay 20%, oo guji "Start" si ay u falanqeeyaan xogta ku saabsan telefoonka.
Markii barnaamijka halkan guuro, weeyna ahayd inaad guji "ogolow", codsi soo bandhigeen shaashadda aad telefoon. Markaas sii wadaan in ay ku dhufo "Start" ee suuqa kala barnaamijka ayaa ah in uu bilawdo iskaanka.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha qoraalka ah tirtiray ka Samsung
Marka scan ay ka badan tahay, natiijo baaritaan si toos ah ahbaa doono barnaamijkan. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi fariimaha tirtiray halkan si faahfaahsan. Sidoo kale, waxaad ku eegaan kartaa fariimaha iyo sawirada halkan. Haddii aad rabto, inaad iyaga soo kaban karto, oo ay la socdaan fariimaha la mid click.
Fiiro gaar ah: farriimaha tirtiray iyo fariimaha hadda jira ee ku saabsan telefoonka leeyihiin midab gaar ah. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, waxaad isticmaali kartaa badhanka on sare ee suuqa kala ah: soo bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
Sida loo Marna lumin Messages aad ka Samsung
Dabcan xaalada ugu fiican noqon lahayd in marnaba lumin fariimaha aad ee meesha ugu horeysa. Habka ugu fudud ee ay tan u sameeyaan waa in ay gurmad fariimaha aad. Waxaa jira laba siyaabood oo sidaas loo samayn, bal aynu eegno kasta oo aad go'aan ka gaari kara oo ugu wanaagsan ka mid kuu shaqeeya.
1. Back ilaa aad xisaabta Gmail
Si taas loo sameeyo si fudud, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Quraanka kaabta & wac si Email App. Waxaa laga heli karaa dukaanka Play Google. Marka lagu rakibay, tuubada si aad u furi. Waa in aad u dhigay, in la raaciyo kor.
Xagga sare aad, Tubada badhanka Go soo socda si ay ugu "Fadlan Calan Gmail hore."
In uu suuqa kala socda calaamadee sanduuqa Connect ka dibna saxiixa in adiga oo isticmaaleya isticmaale aqoonsiga Gmail.
Hadda waxaad leedahay in la sameeyo oo dhan waxaa kaliya sheegi app ah oo xogta waa in la xoojiyaa aad telefoon iyo in ay tahay.
2. kaabta isticmaalaya Wondershare MobileTrans
Habka kale oo run ahaantii fudud si loo hubiyo in aad marnaba lumin mid ka mid ah fariimaha waa in ay isticmaalaan Wondershare MobileTrans . Waa ay fududahay in la isticmaalo software in ay leeyihiin doontaa in aad taageerto ilaa xogta oo dhan ee hal click.
Tallaabada ugu horreysa waa inaad kala soo baxdo oo ay maamulaan Wodershare ka MobileTrans si aad u computer. Markaas xiriiriyaan Samsung in your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. Software waa in la ogaado oo la garto telefoonka. Daaqadda guriga, guji "dib Your Phone".
In uu suuqa kala dhashay dhammaan xogta ku saabsan telefoonka muuqan doono oo dhan si toos ah loo doortay doonaa gurmad. Uncheck alaabta aadan rabin in la xushay in wax walba oo ay dhacdo in this laakiin fariimaha aad. Software ayaa sidoo kale si toos ah u soo xuli doona jid file si uu u badbaadiyo gurmad si on your computer ah. Haddii aad rabto in aad u bedelato fudud guji icon ee Settings iyo doortaan jidkaa file ah.
Markaas si fudud guji "Start Copy" oo sug nidaamka si ay u buuxiyaan.
Hubi in aad telefoonka xiran yahay si aad u computer intii lagu taageero ilaa nidaamka oo dhan. Waxaa fudud in. Hadda waxaad haysataan caymiska yar ay dhacdo in aad lumiso fariimaha aad.
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa Phone Samsung Cell